Alabama inouraya mhondi mumwe musi mushure mokubvisa pamuviri kubviswa - New York Times - TELES RELAY
HOME » mwe Alabama inouraya mhondi mumwe musi mushure mokubvisa pamuviri kubvumirwa - New York Times
Alabama aita munhu nemhosva mhondi China, rimwe zuva pashure promulgation munhu pedyo zvachose kurambidza pamuviri, zviviri zviito ari pamakakatanwa evanhu kuti kazhinji kuti vanhu vose mapato kudana utsvene hwoupenyu hwevanhu.
"Izvi zvinopesana nezvandaimboona," akadaro Hannah Cox, Mutungamiriri weNyika weChristian Conservative Rights, Concerned about the Death Penalty. Mukadzi Cox akataura kuti kubvumirwa kwekuuraya ndiko "chinzvimbo chinoderedza nharo yehupenyu".
Ms. Cox, chizvarwa Alabama uye ichingoshora pamuviri uye rufu, akati kuti zvakawanda kuzvikudza vakatanga kunzwa saizvozvo, kupa sezvo uchapupu mabhiri tichitsigirwa Republicans kuti adzore iyo chirango chekufa chakaiswa mu 11 mitemo yemagungano.
Michael Brandon Samra akaurayiwa nechirwere chinouraya China usiku, maererano neAlambama Attorney General Steven T. Marshall. Mr. Samra uye shamwari, Mark Duke, vakabatwa nemhosva muna 1997 kupondwa vanhu mana - baba Mr. Duke, ari musikana baba vake uye vanasikana vaviri - zvichitevera nharo pamusoro a van Vaipomerwa maviri vakatongerwa rufu asi mutongo Mr. Duke rakanga rarambidzwa nekuti akanga makore 16 panguva kwoumhondi. Mr. Samra aiva nemakore 19.
Kunyange zvazvo nguva ari masanga, zviito Alabama mazuva anoverengeka zvakabatsira anoratidza kwose kwose zvinzvimbo kurudyi enyika kuti vamwe vanhu vanoti vari kurwisana, kudzivirira upenyu hwevanhu hwatakazvarwa mu chinyorwa asi kwete chimwe.
Gov. Kay Ivey, uyo akaramba kukanganisa kuurayiwa kwaakarongwa, akaratidza kunyadziswa kwake pamabasa ake murufu rwekufa. Pakutanga kwenguva yake, akazivisa kuti haana kukoshesa "mutoro wandinotakura" mumabasa makuru, uye akaramba achizvitsanangura semabasa asina kufanira ehofisi yake.
"Kutarisana nemunhu anogona kuurayiwa ndechimwe chezvisarudzo zvakaoma zvandinofanira kuita semutungamiriri," akadaro mushure mekuurayiwa. "Hapana gavhuna anovhara mutoro wekuyera kudiwa kwehupenyu kana rufu; asi mutoro wandinobvuma sechikamu chekuzvipira kwangu kuremekedza mitemo yenyika iyoyo. "
Pasinei neizvi, Mukadzi Ivey haana kushandisa simba rake pasi pemutemo wehurumende kuti abvise kana kutongerwa rufu kubva pakupinda muhofisi muna April 2017. Hurumende, iyo inoparadza kuurayiwa mujeri rehembera pedyo neganhu neFlorida, yakaparadza vanhu vatanhatu panguva yekubata kwake; Mr. Samra aiva wechinomwe.
Mumwe mutauri wemutungamiriri wehurumende haana kupindura mharidzo yeChishanu achikumbira mhinduro, asi Mukadzi Ivey akabudisa zvinyorwa mushure mekuurawa kwaVaSamra.
"Alabama haizodziviriri kurasika kwehupenyu munharaunda yedu, uye nemhosva iyi yakaipa, tinofanira kutora chirango," akadaro mashoko. "Ava vatatu vakafanirwa nekufanirwa neramangwana, uye VaSamra vakatora mukana wekuita izvozvo pasina kushungurudzika. Nhasi, ruramisiro yakadzoserwa kuhama dzeava vakaurawa uye izvi zvinoreva kuti Alabama haibvumiri chero chiito chinouraya. "
Alabama ikozvino 176 vasungwa vakamirira kuurayiwa . Vose asi vaviri vakatongerwa mhosva yekuponda; Kubva 1965, 65 akatongerwa rufu ari pamutsara wekufa.
Kunyange zvazvo vapikisi vechirwere chekufa, saMnu Cox, vanoshamisika kuti vaKristu vanochengetedza sei, semutungamiriri, vanogona kupikisa kubvisa pamuviri nekuchengetedza kuurayiwa, asi vamwe vanopikisa kuti zvese mbiri dzava kupindirana. kusava nemhosva uye mhosva.
"Nenzira imwe, inonzwisisika," akadaro Mark Silk, purofesa wechitendero paTrinth College. "Mafungiro avo ndeokuti vana vasati vaberekwa uye fetuswe upenyu husina mhosva. Havana kuita chinhu chakakodzera kukodzera rufu. Apo vaurayi vakaita chimwe chinhu kuti vakodzero yekufa. Iziso ziso, zino nezino. Ndizvo zvavanoona munyika. "
Purofesa Silk akati vangelicals vatsvene zvikuru, avo vanomirira kupfuura hafu yeAlbama electorate, vangawana matambudziko apo varume kana vakadzi "vanowana nzira kuna Jesu" panguva yekufa kwavo. mutsara.
"Evangelicalism ine zvakawanda zvokuita nekutendeuka," akadaro. "Chinhu chinokosha kwavari. Mhondi kana mupambi uyo anowana nzira yake kuna Mwari ane simba rekuratidzwa kwekutendeuka sezvaunogona kuwana. "
Cox akati akawana nharo yokuti upenyu chinhu chekudzivirira chete kana isina mhosva "kuora mwoyo".
"Vanhu vanofanira kugara vaine mhosva, asi panofanira kuva nehuwandu huzhinji," akadaro. "Iwe hausi wezvawakaita iwe wakaipisisa."
Dzidziso dzeChechi yeKaturike zvinopikisa zvose kubvisa pamuviri uye chirango chikuru nokuda kwezvikonzero zvakafanana.
"Pro-mararamiro ehupenyu haaiti kunzwisisa. apo havakwanisi, "akadaro Krisanne Vaillancourt Murphy, mukuru mukuru weCatholic Catholic Mobilizing Network, boka rinoshandisa kupedza chirango chekufa. "Utsvene hwehupenyu hwevanhu hunoshanda kune vose vasina mhosva uye vane mhosva," akadaro, achiwedzera kuti chechi kudzidzisa kuti chiremera chakapiwa kumunhu naMwari "hachina kurasikirwa kana mushure mokunge vatumwa mhosva yakaipisisa. mhosva. "
"Sezvakataurwa naPapa Francis," hapana mutongo wakarurama usingagoni kutarisirwa, "akadaro Murphy. "Ndicho chikonzero chirango chekufa chisiri chiKristu kana munhu."
Imwe nyanzvi yeEvangelical Christianity yakati vazhinji vevhangeri veAbama vanove vasina kunzwa kusagadzikana pakati pekutsigirwa kwechirwere chekufa uye kushorwa kwavo kubvisa pamuviri.
"Vazhinji veevhangeri dzakachengeteka ndisingambofungi kaviri ndisati ndauraya mumwe munhu uye ndaifamba kufamba mangwana," akadaro John Fea, purofesa wezvakaitika kuMesiya College. Akawedzera kuti maonero avo aiwanzoumbwa nehondo dzezvematongerwe enyika dzakange dzasangana mumakumi emakumi apfuura pamusoro pehupenyu hwevanhu. Somuenzaniso, vanowanzopikisa kushandiswa kwemari pamapurogiramu ehurumende anotapudza nhamba yekusununguka kusingadiwi.  Vaevhangeri vanofambira mberi vanoona matambudziko akasiyana, akadaro Fea, asi "ivo vashomanana muAlabama uye vazhinji veevhangeri yekumaodzanyemba."
Vhiki imwe mushure mekuberekwa kwaArie, mhirizhonga yaMeghan, Trevor Engelson, anobata zviratidzo kuburikidza nekuroorwa naye